«Tsisy fika!» -
03/12/2018 admintriatra Tresaka 0
Soa ihany fa nisy an’iny olona tsara sitra-po naka “vidéo” tamin’ny finday ilay herisetra feno habibiana nataon’ireo mpitandro filaminana sy ny zanaky ny jeneraly mpiambina ny praiminisitra tetsy Antanimena iny raha tsy izany mbola nahita hambara nialàna bala indray i Ntsay Christian. “Tsisy fika” intsony mantsy ka voatery namoaka fanambarana haingana be, efa niandry izay ho fihetsiky ny praiminisitra rahateo koa ny olona.
Manamafy ilay terorisma nataon’i Andry Rajoelina teny amin’ny CCI Ivato mantsy iny zava-nitranga tetsy Antanimena iny. Amin’ny fotoana sy tranga tsy ampoizina akory no hivoahan’izay nokotrehina tany ambadika tany. Mivandravandra izao fa tena nomena baiko sy nomanina ho amina herisetra sy habibiana tokoa ireo mpitandro filaminana miara-dia amin’izao governemanta MAPAR izao.
Tahaka ireny nasehon’ny mpiambina sy ny zanaky ny lehiben’ny mpiambina ny praiminisitra Ntsay Christian ireny izany no miandry ny vahoaka Malagasy rahatoa ka Rajoelina no tafakatra eo amin’ny fitondrana saingy tsy navelan’ny lahatra tsy nipoitra dia ireny novakiana fotsiny ireny.
Novakiana fotsiny tokoa ny tany anaty farahatoky ny MAPAR tamin’iny vono sy fandratrana niharo habibiana tetsy Antanimena iny. Tsy maintsy fitondrana jadona ho hapetrak’i Andry Rajoelina eto raha tsy izany ho sarotra ho azy sy Mamy Ravatomanga ny hamerina ao anatin’ny fotoana fohy ireo arivo miliara lany nandritra ny propagandy. Io indray dia mazava ny resaka, “tsisy fika” fa tsy maintsy ny famerenana ny volan-dRavatomanga no laharam-pahamehana.
Alaivo sary an-tsaina, mbola tsy eo amin’ny tena fitondrana akory dia efa ireny no zava-misy, mbola tsy miditra an-tsehatra akory ireny mersenera nafaran-dRavatomanga teny amin’ny CCI Ivato ireny. Izay no mbola hamerenana eto indray ny hafatra manao hoe: “tongava mifidy amin’ny faha-19 Desambra”. Izany ihany no vahaolana tsara indrindra hisakanana ireto “putschiste” ireto hiverina eo amin’ny fitondrana.